Dab Baabi,iyey Bakhaarka Dawada Isbitaalka Jijiga – Rasaasa News
Jigjiga – [rasaas.com]. Salaada Makhrib ka dib ayuu dab wayn qabsaday Isbitaalka karamardha ee magaalada Jigjiga . Dabkan ayaa la filayaan uu sababay Qarax Gaadhi Xaajiyad [khamsiin] laba shireey ah oo aan mudo shan bilood ah shaqaynin, kana mid ah gawaadhida dawlada oo yaalay dhinaca Bakhaarka kaydka daawooyinka ee Isbitaalaka ayaa Qarax uu sameeyay dab ka kacay.
Lama ogga waxa sababay in uu gaadhigu qarxo, balse waxaa uun la ogg yahay in dabku uu ka bilowday qaraxa gaadhiga ka yimid.
Ka dibna dabkii usii gudbay bakhaarka kaydka daawooyinka, halkaasna axaa ku bas beelay wax alaale wixii daawo ahaa ee Isbitaalka taalay iyo Gaadhigii dabka sababay oo ayna jirin cid ku lug lahayd oo ka danbaysay sida ay cadeeyeen dad arkayey.
Hantida ku baa,ba,ady Barkhaarka dawada ee Jijiga ayey bixiyeen Hayyado Caalami ah oo samo fal. Magaalada Jijiga oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan dhulka Somalida Ogadeeniya, ayeyna jirin Isbitaal kale oo ku yaala magaalada.
Isbitaalka ayey jiifaan dad bu,aan ah oo badan kuwaasi oo dawooyinka ka heli jiray bakhaarkan gubtay. Arintan oo aad u saamayn doonta dadweynaha ku nool magaalada Jijiga.